Voina · Desambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Voina · Desambra, 2017
Tantara mikasika ny Voina tamin'ny Desambra, 2017
Azia Atsinanana 30 Desambra 2017
Azia Atsinanana 17 Desambra 2017
Matetika no lasibatry ny zavo-tsetroka vokatry ny fandoroana ny zavamaniry any amin'ny nosy manodidina an'i Sumatra i Malezia sy Singapaoro. Mankany Thailandy hatrany ny olona sasany hitady lanitra madio kokoa. Ankehitriny anefa dia toa mijaly noho ity fahasimban'ny tontolo iainana ataon'ny olombelona ity ihany koa ny faritra sasany any Thailandy.
Maraoka: Naneho Hevitra Momba Ny Daroka Baomba Famonoan-tena Tsy Nahomby Tao Meknes Ny Bilaogera
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Desambra 2017
Herinandro mafapàna tao Maraoka. Voalohany, nisy horohorontany madinika namely ny firenena tamin'ny Alahady alina, ary avy eo fikasana fanaovana vy very aina tamin'ny daroka baomba tao an-tanànan'i Meknes.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 16 Desambra 2017
Pejy Manontolon'ny Gazety Iray An-toerana Miresaka Taratra Nokleary Nampisahotaka An'i Shina
Amerika Avaratra 15 Desambra 2017
Heverina ho fanehoan-kevitra amin'ny mety hisian'ny ady ao amin'ny saikinosy Koreana ny pejy iray manontolo mampiseho ny fepetra fisorohana ny taratra nokleary.
Maraoka: Miresaka Momba Ny Fanahin'i Maraoka sy ny Daroka Baomba
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 10 Desambra 2017
Noho ny lahatsoratra iray tao amin'ny New York Times mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanahin'i Maraoka", sahirana miady hevitra momba ny marina amin'ity fanambarana ity ny tontolon'ny bilaogy Maraokana.